Aziwenzanga umehluko izikhukhula eGauteng | News24
Aziwenzanga umehluko izikhukhula eGauteng
Johannesburg - Izikhukhula ezibe sesifundazweni saseGauteng ngoLwesithathu azibanga namthelela ongakanani eVaal Dam.
Kunalokho amanzi ezikhukhula angene kakhulu eJuskei River okuwumfula ophakela iCrocodile River eNorth West.
Iningi labantu belinethemba lokuthi imvula izosiza kwenyuke izinga lamanzi emadami aphelelwa amanzi ngokushesha ngenxa yesomiso.
OLUNYE UDABA: Kufunwa imindeni yabashone engozini yetekisi
Okhulumela uMnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle, uSputnik Ratau, uthi: "Esikudingayo ukuba imvila iqhubeke nokuna isikhathi eside, kodwa hhayi izikhukhula. Sidinga mhlawumbe imvula ezona amasonto ayisithupha noma angu-8, ngaleyo ndlela amanzi azongena emifuleni agcine esengene nasemadanyini.”
Khonamanjalo, kuyaqhubeka ukuthungathwa kwengane eneminyaka emithathu ubudala enyamalale ngemuva kokugugulwa amanzi eSetjwetla e-Alexandra.